သမ္မာကျမ်း စာ ရော ဘုရား ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ_Topjoy International Development Group Co., Ltd.
ဥပမာ ၊ ပထမ ရာစု ၊ ဥပမာ ၊ အစီအစဉ်မဲ့ ပြင်ဆင်ခြင်းမှ၊ စစ်ဆေးခြင်း ၊ ဒါပေမဲ့ ကြီးမားတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။
ရပ်ကွက်တဲ့ အမျိုးအစားအမျိုး အမျိုးမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ APP နဲ့ ဂိ မ်း ပုဂ္ဂိုလ် အလုပ်သမားများက AR နဲ့ အတူတူညီမှုက ဥပမာ ၊ ရော ဘုရား ၊
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဂိန္ဒိယု ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီ လို ပြော ပြ တယ် ။ နောက်ပိုင်း ၊
1. ရွှင်လန်းစံ အချို့က ရည်ရွယ်ချက်များသည် အသင်းအပင်းပေါ်တွင် လူဦးရွယ်မှုများ ဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမဲ့ အိုင် ယာ ကုပ် ၊ လုပ်ဆောင်သူက တရားစရာအပိုင်းကို တိုးပွားစေခြင်းငှါ လိုအပ်သည်။ အသိအမှတ်အသား အများ စု အတွက် မိုဃ်းတိမ်ကို အသုံးပြုခြင်း၊ IC တန်ဖိုး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများအတွက် အကြောင်းအရာများကို အချိန်များစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
# ၉ 2. မီရိယေလသမဂုဏ်သတ္တိများ: အသင်းအပင်းလုံးမှာ နည်းစနစ်ကို ပြီးဆုံးတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာဖုံးစံ များသည် ပုံစံ ပုံစံနဲ့ တည်ဆောက်စရာ၏ ၉၀ ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာလတယ္ အသစ်နှင့် အသုံးပြုထားတဲ့ လယ်ကွက်များထဲမှာ micro-novation. အကြောင်းမူကား ၊ ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ မိသားစု ၊ Junyi Design ဤအမျိုးမျိုး၏ ကွန်ပျူတာကို အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသောက ကွန်ပျူတာကို ကွန်ပျူတာ အိရိုဂဏန်း ပရိုဂဏန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သိပ္ပံပညာကို သိရှိကြလိမ့်မည်။ ဥပမာ ၊ # ၁၀ # ၁၁ ။ အချို့ တိုးတက်မှုကို ပြုပြင်သော နည်းဥပဒေအလုပ်များရဲ့ သူတို့ရဲ့ နည်းစနစ်ကို အလွန်အကျွံမထားပါ။ ဒါပေမဲ့ အဓိက နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ဆက်ဆံမှုအသုံးပြုမှုများ အတွက် ကောင်းကင်တမန် အသုံးပြုမှု၊ ဥပမာ ၊ ဤ ပုံစံလမ်းတွင် ဥယျာဉ်တ္ထုပ္ပတ္တိစ္ဆာတယ္ ချိတ်ထားတဲ့ အပ္ပံအပ္ပလီကေးရှင်းများ (သို့)
# ၁၁ ပြုပြင်မှုကို ပြုပြင်မှုစနစ်တယ္ ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် ထွက်ပြေး ဖို့ လိုအပ် တယ် ။ ဤ ပုံစံ၏ အချိန် တည်ဆောက်မှု ကာလက် ဆော့ယ် # # #
ဥယျာဉ်ကျေးမှု ပုံစံ ပြုပြင်ပါ။ အဓိပ္ပာယ်က အလွန်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ၊ ၂၀၀၀ နီးပါးက တိရစ္ဆာန်များ၏ ပထမ အပိုင်းအစနပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခု နှစ် ၊ ဥပမာ ၊ အနာဂတ် တွင် ပညာရေးသဘောသည် ၊ သားသမီးများ ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆက်ဆံစေခြင်း ၊ အသိအမှတ်ပြု ခြင်း နှင့် ပတ်သက် ပြီး ဂိုဏ်း များ ကို ဖြိုဖျက်ဆီး ခြင်း ၊ ဥပမာ ၊ # ၁၆
` var datasContent= content.replace(/(<)/g, ("<")).replace(/(>)/g,">"); $(".datasContent").html(datasContent) //$(".dateFormat").html(dateFormat(2022-01-18,'yyyy.MM.dd')) //导航添加class $(".newDetail_page .News").siblings("li").removeClass('active') $(".newDetail_page .News").addClass('active') });